I-Best Fabric Banner Stand- Ukukhiqizwa Kwe-Premium kanye neFektri | UJesson Flag Ubuciko Nemisebenzi
IStraight Fabric Banner Stand ithuthukisiwe kusuka ekubonisweni kwendabuko okuqondile. Imiphumela yokubonisa engcono nokukhetha okuningi.
Bonisa Imikhiqizo Yakho Nemikhiqizo Ngendlela Ehlukile
Izitebhisi zezindwangu zithola ukuthandwa okwandayo ngenxa yokusikwa kwayo okulula nemidwebo ephrintiwe ephilayo. Isitendi sendwangu eqondile, esifana ne-roll up banner ngokubuka, kuyindlela enhle kune-roll up banner esetshenziswa kakhulu. Isitendi sendwangu eqondile sangaphandle sinesisekelo esiqinile futhi esiqinile, esenza ukuthi sime ngisho nangezinye izinsuku ezinomoya.
Izindwangu Ezihlala Njalo Zikwenza Ukujabulele Ukusetshenziswa Okuhlala Isikhathi Eside
Indwangu esetshenziselwa ukwenza indwangu ime ingasindi futhi ingagoqwa, okwenza kube lula ukupakisha nokuhambisa. Ngasikhathi sinye, indwangu, ngokungafani nezinye izinto, ingagezeka futhi isetshenziswe isikhathi eside impela.
Indwangu Yokuqina Kwe-240g
Indwangu yokuvimbela engu-280g
Ukwethula I-logo Yakho Nebhizinisi ngendlela eqondile
Lapho uphrinta ezindwangwini, kunezinketho ezimbili ongazenzela zona: ihluzo ezinamacala amabili nhlangothi zombili. Ungakhetha uhlobo olufanele kakhulu ukuthuthukisa ukubonisa kwakho ngokuqhubekayo. Uma unesabelomali esilinganiselwe, ungahle uthande isithombe esisodwa sohlangothi esiphrintiwe. Kodwa-ke, uma ufuna ukudalula imilayezo yakho ngezinga elikhudlwana, isitendi sendwangu ephrintiwe ephindwe kabili sikulungele.
Indwangu Enhlobonhlobo Yesibhengezo Sima Ubukhulu Obahlukahlukene
Lesi sitendi sesibhengezo sendwangu sinobukhulu obuhlukahlukene futhi singasetshenziswa ezikhathini eziningi. Uma unesikhala esilinganiselwe sokumaketha, kuzosebenza isibhengezo sendwangu engu-2ft. Kodwa-ke, uma ungathanda ukudala okwasemuva okuhehayo, ungakhetha okukodwa okungu-5ft ngosayizi. Uma ungaqiniseki ukuthi iliphi elifanele umcimbi wakho, vele usishiyele i-imeyili futhi umthengisi wethu wokuthengisa osebenzayo uzokusiza ngalo.
Indwangu Pop Up Khombisa
Pop Up Khombisa
I-Pop Up Display Stand
Izibhengezo Eziphezulu Zethebula